စာရေးသူ: ရေသည်မမ စာတင်သည့်အချိန်: 1:21:00 AM
တို့ မိသော်ကြီး အရူးလုပ်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့လေ... သြော်လူတွေဟာ အရူးထဲက အရူးတွေပါပဲလေ... တပ်မက်မူ လိုချင်မူတွေက လူတိုင်း ဖြစ်နေကြသမျှတော လူတိုင်း ဟာ ရူးသွပ်နေကြအုံမှာပဲ... (အဟိ ကျွန်တော်လည်း အရူးပါပဲ)... အင်း တို့အမကြီး မိသော်ကတော.. အရူး နည်းနည်းလွတ်ကင်းသွားပြီထင်တယ်... ကြယ်လေးကို မတွယ်ကပ်တောဘူးဆိုတော... နောက်နှစ် April Fool Day မှာ အနော့အမကြီး မိသော်တစ်ယောက် အရူးမလုပ်ခံရပါစေနဲ့လို့ မောင်မောင်လေး ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်...
Sat Nov 25, 02:21:00 PM 2006
Sat Nov 25, 07:16:00 PM 2006
ချစ်မသော် . ဒီလိုပါပဲဗျာ .. ရူးသွပ်မှု တစ်ခုတော့ ဖြစ်ခဲ့ကြတာပေါ့ . ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ စိတ်ထဲက ရုန်းထွက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ မသော် တော်ပါတယ် . ခ ဆို အဲ့ဒီ ကြယ်ကလေး ကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ ရူးသွပ်မိနေတုန်းပဲ . မသော် စာ ဖတ်လိုက်တော့ တရားရတယ် . ကြိုးစားလိုက်အုံးမယ်နော် .. ညီမလေးကိုလဲ အားပေးအုံး ..
Sat Nov 25, 08:57:00 PM 2006
Eun Miso said...
ညဖက်တွေမှာ ပြန်ရှာရင်လည်း အဲ့ကြယ်ကလေးမရှိတော့ပါဘူး။သူပြုံးပြနေကျ သူ့ကိုပြန်ပြုံးပြနေကျကောင်မလေးကို သူမြင်သွားတယ်။ကြယ်စင်တွေကြားထဲအားငယ်နေတဲ့ကြယ်လေးက ဒီလောက် ကြယ်စင်စုတွေအများကြီးထဲမှာမှ သူ့ကိုတယုတယ ဂရုစိုက်သူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့ ရှင်သန်ပျော်မြူး တစတစထွန်းလင်းလာတာကို ကောင်မလေးမသိဘူးလေ။တကယ်တော့ ကြယ်စင်လေးက ကောင်မလေးကြောင့်တောက်ပလာခဲ့တာ ပြူံးရယ်လာခဲ့တာ။ညစဉ်တိုင်း ပျော်နေခဲ့တာ။ရုတ်တရက် ကောင်မလေးပျောက်သွားတော့ နေမထိထိုင်မသာလေ။ကြယ်စင်လေးဘဝက ဘယ်မှရွှေ့မရပြုမရ။ကောင်မလေးကိုလိုက်ရှာချင်ပေမယ့် ရှာမရလေတော့ ပေါ်လာမလား မျှော်ရင်းမျှော်ရင်း ကြယ်စင်လေးအလင်းက မှေးမှိန်ရုံမက ကြယ်စင်လေးကြွေရရှာသွားပြီဆိုတာ
Mon Feb 20, 09:50:00 PM 2017